लिपि सुन्दरी- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
असार २७, २०७६ हिमेशरत्न बज्राचार्य
पछिल्लो समय रञ्जना लिपि खुबै चर्चामा छ  । नहोस् पनि किन र ? यो जत्तिको सुन्दर र आकर्षक लिपि अरू कमै छन्  ।
नेपालले ‘हाम्रो हो है यो’ भनेर गर्व गर्न लायकमा पर्छ, रञ्जना लिपि । पछिल्लो समयको चर्चा केन्द्रित रहेको छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको प्रचार प्रसार हुनुपर्छ भन्नेमा । मूलधारको नेपाली मिडियाले नै यसलाई लिएर बाक्लो चर्चा गरेको छ र भनेको छ, अब यस लिपिलाई लिएर केही गर्नै पर्छ, अहिले नगरे कहिले त ?
राम्री त सुनिता डंगोल पनि छिन् । पहिलो त उनको स्वर नै राम्रो छ, अझ फरक छ । उनी प्रायः मुस्कुराइरहेकी हुन्छिन् र केही प्रतिक्रिया दिन अगाडि उनको मुखमा हाँसो देखिन्छ । त्यसमाथि उनको हस्की स्वर । त्यही स्वरलाई सुहाउँदो अलि मोटो, तर मोडल जस्तै केही न केही देखिन्छ भने त्यो मिल्ने शरीर । त्यसैले त उनी हुन्, सन् २०११ की मिस नेवाः । अब प्रश्न उठ्छ, यो रञ्जना लिपि र यी सुनिताबीचको सम्बन्धचाहिँ के हो त ?
सबैभन्दा पहिले त्यही मिस नेवाः कै प्रसंगतिर । यस्ता सुन्दरी प्रतियोगिता जित्नेले वास्तवमै ठूल्ठूला दाबी गर्ने गर्छन्, म यस्तो गर्छु, म उस्तो गर्छु भनेर । तर केही सबैले यस्ता दाबीअनुसार काम गरेका छन् त ? उत्तर दिन सजिलो छ, यस्तो भएको छैन । केही अपवाद नभएका पनि होइनन्, जस्तो यिनै सुनिता । उनलाई मन पर्ने विषय हो, सामाजिक कार्य । अझ भनौं, सामाजिक काम । सुरुमा विज्ञानकी विद्यार्थी रहेकी सुनिता अहिले त्यही कारणले ‘सोसल वर्क’ मा स्नातकोत्तर गर्दैछिन् । अहिले तेस्रो सेमेस्टर चलिरहेको छ ।
उनी पढाइमै मात्र सीमित छैनन्, समाजलाई फाइदा पुग्ने केही न केही काम गरिरहेकै छिन् । उनको यो काम विशेषतः शिक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित छ । उनी यसबीच हल्का पत्रकार पनि हुन्, टीभीतिर कार्यक्रम पनि चलाउँछिन् । स्टेज कार्यक्रम चलाउन भनेपछि उनी हुरुक्क हुन्छिन् । भित्री काठमाडौंमा जन्मेर हुर्केकी सुनिता अचेल कीर्तिपुरवासी भएकी छन् र अहिले उनको प्रमुख परिचय बनेको छ, लिपि सुन्दरीका रूपमा ।
अचेल उनी अधिकांश समय रञ्जना लिपिको प्रचारप्रसारमै व्यस्त छिन् र यसका लागि उनले नयाँ–नयाँ उपाय निकालिरहेकी छन् । उनको यो काम युवा वर्गमा केन्द्रित छ । यो आधुनिक छ । पछिल्लो समय रञ्जना लिपिले लेखिएका टिसर्ट जताततै देख्न सकिन्छ, त्यसमा कुनै न कुनै हात सुनिताको हुन सक्छ । केहीले लिपि लेखिएकै ह्यान्ड–ब्याग पनि बोक्ने गरेका छन् । यी ब्याग पनि कुनै न कुनै रूपमा सुनितासँग जोडिन सक्छ ।
सुनिता र उनको समूहले अचेल गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो काम भने क्याली जात्रा हो । शनिबार पारेर होस् अथवा कुनै बिदाको दिन उनको समूहले यस्तो क्याली जात्रा गर्न थालेको भर्खरै हो, ०७५ यता । तर यस्तो जात्रा दुई दर्जनभन्दा बढी भइसकेका छन् । यसलाई आधुनिक पारामा भन्दा रञ्जना लिपिको उत्सव हो । साहित्यिक उत्सव भनेजस्तै लिपिको उत्सव, जहाँ दोहोरो कुराकानी हुन्छ र यस्तो युवा वर्गलाई बढी मन पर्छ ।
लगभग १० हजार जत्तिले यस्ता उत्सवमा भाग लिइसकेका छन् । भर्खर यस्तै एउटा उत्सव वसन्तपुरमा भएको थियो, त्यो पनि बृहत् रूपमा । धेरैले यसमा भाग लिए । केही नाम चलेका रेस्टुरेन्टमा पनि यस्ता उत्सव भएका छन् । यस्ता रेस्टुरेन्टमा एकातर्फ सबै सँगै मिलेर खाने अनि रञ्जना लिपिलाई लिएर खुलेर कुराकानी गर्ने । मज्जा हुन्छ नि, यस्तो काममा । काठमाडौंबाट सुरु भएका यात्रा क्याली जात्रा लमजुङसम्म पुगिसकेको छ र लक्ष्य छ, योभन्दा पनि बाहिर जाने ।
यस लागि उनी स्थानीयसँग साझेदारीलाई राम्रो मान्छिन् । रञ्जना लिपिमा लेख्न, पढ्न यी सुन्दरी पोख्त भइसकेकी छन् । अझ यो लिपिबारे धारा प्रवाह बोल्न पनि सक्षम भइसकेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘रञ्जना लिपि खालि लिपि मात्र होइन । यो सुन्दर पक्कै छ, तर यसलाई सुन्दर छ भनेर मात्र पुग्दैन । खासमा यो हाम्रो संस्कृति हो, इतिहास हो । सम्पदा नै हो । हाम्रो धार्मिक पक्षसँग पनि यो ठ्याक्कै जोडिएर आउने गर्छ । आजको युवा पुस्ताले यसमा रुचि राख्नै पर्छ ।’
उनकै भाषामा इतिहासले वर्तमान पुस्तालाई शिक्षा दिन्छ । यो पुरानो शिक्षा सिक्ने एउटा राम्रो उपाय रञ्जना लिपि सिक्नु पनि हो । सुनिता त्यसैले युवा पुस्ता रञ्जना लिपितर्फ आकर्षित होस् भनेर नै आधुनिक जुक्तिलाई व्यवहारमा लागू गरिरहेकी छन् । जस्तो, अचेल रञ्जना लिपिलाई लिएर एप नै उपलब्ध छ । फेसबुक, यु–ट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार प्रसार पनि भएकै छ । यसमा बढी काम गर्ने सोच छ, उनको ।
यस्तोमा उनको प्रशंसा नगरेर सुख पाइन्छ र ? पक्कै पाइन्न । खासमा उनले गरिरहेको काममा उनी मात्र छैनन् । उनका साथीहरू छन् र सायद यिनै साथीहरू बढी काम गरेका पनि होलान् । यस्तो काममा एउटा अनुहार भने चाहिन्छ, अनि ‘ग्ल्यामर’ को मात्रा भए, अझ राम्रो । रञ्जना जस्तो सुन्दर लिपिको बखान सुन्दर युवतीले गर्छ भने अब के चाहियो र ? २६ वर्षीया सुनिता भन्छिन्, ‘आउनुहोस्, हामीसँग सहकार्य गर्नुहोस्, रञ्जना लिपिको प्रचारप्रसार गर्नु हामी युवाकै काम हो ।’
प्रकाशित : असार २७, २०७६ ११:५३
फ्रान्समा आइतबार सम्पन्न महिला विश्वकपमा अमेरिकाले उपाधि रक्षा गर्‍यो  । आठ संस्करणमध्ये चारपल्ट अमेरिका च्याम्पियन हुँदा फरवार्ड मेगान रोपिनोले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको गोल्डेन बल र सर्वाधिक गोलकर्ताको गोल्डेन बुट अवार्ड जितिन्  ।
उनी मैदानबाहिर पनि उत्तिकै चर्चित छिन् । बीबीसीद्वारा प्रकाशित लेखको अनुवाद :
समान ज्याला !समान तलब ! समान भुक्तानी !
लियोनको भरिभराउ रंगशालामा उपस्थित हरेकले एकै स्वरमा यो भनिरहँदा पुष्टि हुन्छ कि यो मेगान रापिनोकै लागि आयोजित विश्वकप हो । अमेरिकाका यी सहकप्तानले लगातार दोस्रोपल्ट विश्वकपको ट्रफी घर लगिन् । फाइनलमा उनले पहिलो गोल गरिन् । सर्वाधिक गोलकर्ताका रूपमा गोल्डेन बुट र प्रतियोगिताकै उत्कृष्ट खेलाडीको गोल्डेन बल विजेता बनिन् । फाइनलको उत्कृष्ट खेलाडी पनि उनी नै भइन् ।
मैदानबाहिर, उनी संसारकै शक्तिशाली नेताका रूपमा चर्चित भइरहेकी छन् । उनको एकमात्र आरोप के हो भने विश्व फुटबलको नियमनकारी निकायले महिलाको खेललाई सम्मान गर्दैन । उनी र पूरा अमेरिकी टिम समान पारिश्रमिकका लागि आफ्नो देशको फुटबल महासंघसँग आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
फिल्म स्टारहरूले उनको बैजनी रंगको कपालप्रति सम्मान जनाइरहेका छन् भने उनको दुवै हात फैलाएर मनाइने खुसियालीको थुप्रै ‘मेमे’ बनेका छन् । ‘मेगान यस्तै क्षणका लागि बनेकी हुन्,’ नेदरल्यान्ड्सलाई २–० ले हराएर चौथोपल्ट विश्व विजेता बनेको अमेरिकी टिमका प्रशिक्षक जिल इलिसले भनिन्, ‘जति ठूलो घेरा (उज्यालो) छ त्यति नै उनको चमक छ ।’
३४ वर्षको उमेरमा पनि मेगान महिला फुटबलमा नयाँ अनुहारकै रूपमा चिनिन्छिन् । उनले ३ महादेशका ७ क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलेकी छन् । रिजन एफसीबाट उनले दुईपल्ट नेसनल वुमन्स सकर लिगको उपाधि जितेकी छन् । लियोनबाट फ्रान्सेली शीर्ष डिभिजनको उपाधि । आफ्नो देशका लागि ओलम्पिकमा स्वर्ण र विश्वकपमा २ ट्रफी ।
उनका पुराना भिडियो हेर्‍यो भने उनी सधैं एक मनोरञ्जनकर्ताका रूपमा पनि देखिन्छिन् । सन् २०११ को विश्वकपमा कोलम्बियाविरुद्ध गोल गरेपछि उनले रंगशालाको माइक लिएर ब्रुस स्प्रिङस्टनको ‘बर्न इन द यूएसए’ गाएकी थिइन् । महिला फुटबलको लोकप्रियता पहिलेको तुलनामा बढेको छ । यस्तो महसुस गर्न थालिएको छ कि मेगानले जुन अडान लिएकी छन्, फुटबलमा समानताका लागि यो निर्णायक चरण हो ।
जब अमेरिकाले तीनै जित हासिल गरेर समूहको विजेता बनेको थियो । मेगानलाई अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयबाट सम्मानका लागि बोलाउँदा जाने कि नजाने ? उनको प्रस्ट जवाफ थियो, ‘जान्न’ । पछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरी, ‘मेगानले कुरा गर्नुभन्दा अघि विश्वकप जित्नुपर्छ’ भनेका थिए । विश्वकपका दौरान हरेक खेलअघिको राष्ट्रिय गान बज्ने समयमा उनी शान्त देखिइन् । यो अमेरिकी फुटबलका क्वाटरब्याक कोलिन कापरनिकप्रतिको सम्मान र साथ हो ।
क्यालिफोर्नियाकी यी खेलाडीले फाइनलपछि पत्रकारका हरेक प्रश्नको कडा र डटेर उत्तर दिइन् । फिफाद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको पुरस्कारमा महिला र पुरुषबीचको अन्तर किन हुन्छ भन्ने नै उनको मुख्य प्रश्न थियो । ‘मैले अजेय महसुस गरिरहेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘हामीले निकै सुन्दर र अविश्वसनीय यात्रा गर्‍यौं । हामी उत्कृष्ट दूत बन्न सक्दैनौं । सार्वजनिक बेइज्जतीले कहिल्यै पनि कुनै एकलाई दुःखी तुल्याउँदैन नि हैन ?’
वास्तवमै १ सय ५८ क्याप जितेकी मेगान मात्र अमेरिकी टिमको स्टार होइनन् । निकै उत्कृष्ट प्रतिभा र सुपरस्टारहरूले भरिएको छ अमेरिकी टिम । अमेरिकी राष्ट्रिय टोलीमा एलेक्स मोर्गान स्थापित व्यावसायिक अनुहार हुन् । उनी खेलाडीसँगै मोडल,अभिनेत्री र लेखक पनि हुन् । उनले समूह चरणमा थाइल्यान्डमाथि १३–० को जितमा ५ गोल गरेकी थिइन् । इंग्ल्यान्डविरुद्ध चियाको चुस्की शैलीको गोलको खुसियालीलाई चर्चामा ल्याइन् । त्यससँगै उनी सर्वाधिक गोलकर्ता बनेकी थिइन्, जसलाई मेगानले फाइनलमा बराबरी गरिन् ।
वासिङ्टन स्पिरिटकी मिडफिल्डर रोज लाभेलीले यस विश्वकपमा ३ गोलसहित प्रभावशाली प्रदर्शन गरिन् । फाइनलमा डच टिमविरुद्धको दोस्रो गोल पनि उनैले गरेकी थिइन् । तर, अहिलेसम्म पनि सबैको मुखमा एकजनाको मात्र नाम छ । ‘मेगान यस्ती खेलाडी हुन् कि उनले आफ्नो उपलब्धिलाई आवाज उठाउने माध्यमका रूपमा सदुपयोग गरिन्, जुन कसै न कसैले गर्नुपर्ने थियो । उनले सही सवाल उठाइरहेकी छन्,’ इंग्ल्यान्डका पूर्वडिफेन्डर एलेक्स स्कटले भने ।
‘मलाई थाहा छैन, उनले यो अभियान कहाँसम्म पुर्‍याउनेछिन्, तर यदि उनी रोकिइन् भने यस मुद्दाको छिनोफानो हुनेछैन,’ अमेरिकी टिममा उनकी पूर्वसहकर्मी गोलकिपर होप सोलोले भनिन् । उनी नियमित डोपिङ परीक्षणपछि उनी पत्रकार सम्मेलनमा ढिला आएकी थिइन् र प्रशिक्षक इलिसलाई रोक्दै उनको प्रवचन सुरु भयो । माइक्रोफोनमा आफ्नो स्थिति सम्हाल्नुभन्दा अगाडि नै उनले समान पारिश्रमिकबारे भनिन्, ‘मैले पार्टीका लागि निमन्त्रणा पाएँ । मेरो विचारमा सबै जना कुराकानीलाई अर्को स्तरमा लैजानका लागि तयार हुनुहुन्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोकै सामुन्ने समर्थकले समानताको नारा लगाइदिए । उनले भनिन्, ‘मेरो विचारमा हामी जे कुराका लागि योग्य छौं, त्यसैमा प्रश्न उठाएका हौं । हामीलाई समान पारिश्रमिक दिन्छन् त ? सबै सहमत छन् । अब के भन्नेमा जाऔं । हामी विश्वका अरू महिलालाई कसरी सहयोग गर्न सक्छौं ? फिफाले त्यो कसरी गर्ला ?’ प्रशिक्षक इलिसले भनिन्, ‘केही व्यक्तिलाई उज्यालोले जलाउन सक्छ तर मेगान भने चम्किएकी छन् ।’